उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोको मनछुने भाषणः चुच्चो किन गायब पारियो ? देश बेचुवा को हो ? « Mechipost.com
उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोको मनछुने भाषणः चुच्चो किन गायब पारियो ? देश बेचुवा को हो ?
प्रकाशित मिति: ३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार १५:१६
फिदिम । नेपालको संशोधित नयाँ नक्साअनुसारको निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्न जारी संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मधेशवादी नेताद्वय उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो निकै महत्वपूर्ण र मनछुने भाषण गरेका छन् ।
नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महाकाली सन्धी गर्दा गल्ती भएको वताउँदै गल्ती गर्नेले माफी माग्नुपर्ने वताउनुभयो । यादवले मुहानको टुङ्गो नलगाउनु नै गल्ती भएको परराष्ट्रमन्त्रीले नै वताएको भन्दै माफी माग्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा किन गायब पारिएको भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । “५८ वर्षअघि त चुच्चो थियो । चुच्चो किन गायब भयो ?” उहाँले भन्नुभयो । यादवले नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि प्रमाण खोज्नु समिति गठन किन आवश्यक पर्यो ? किन उल्टो बाटो हिँड्नुपर्यो ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रवादको भावना जनतामा आउनुपर्ने वताउँदै आफ्नो दल देशभक्ति र राष्ट्रवादका विषयमा हामी सधैँ दृढ रहेको वताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रत्येक मधेशी सीमा रक्षक सेना भएर सीमामा उभिएको वताउनुभयो । उहाँले सरकारले अन्याय गरेपनि मधेशी जनता आफ्नो सीमाका लागि लडेका र ज्यानै गुमाएको स्मरण गराउनुभयो ।
सभामुखले बोल्न प्रशस्त समय नदिएपछि महतोले “हामी पनि प्रधानमन्त्री भएपछि समय प्रशस्तै पाउँछौँ होला । हामी पनि त्यहि लाइनमा छौँ” भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो ।
महतोले फेरी राष्ट्रघात हुनसक्ने वताउनुभयो । उहाँले देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्ने वताउनुभयो । “त्यो जमिन त हाम्रो थियो नि । कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो ? खोई श्वेतपत्र ? तिनलाई टुडिखेलमा झुण्ड्याउनुपर्दैन् ?” महतोले भन्नुभयो ।
महाकालीको मुहान क्लियर भएको भए नेपाली जमिन अतिक्रमण हुन नसक्ने भन्दै महतोले महाकाली सन्धी कसरी भयो ? त्यो सम्झौता कसले पारित गरायो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले मधेशीप्रतिको धारणामा परिवर्तन गर्न, जनताका भावना बुझिदिन र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय एकतामा आउने बाटो बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।